उदारणीय बिहे ! – Khabarhouse
उदारणीय बिहे !
Khabar house | २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार १६:५१ | Comments
काठमाण्डौं : बिहेमा दिने तिलक, दाइजो, जन्ती, भोजभतेर, बाजागाजा तथा अन्य तडकभडक नियन्त्रण गर्नेगरि सरकारले कानुन तर्जुमा गरेको छ । तिलकलाई रोक र दाइजोलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै दण्डनीय बनाएको छ । यस्ता मु’द्दा सरकार वादी भएर चल्ने र सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । तिलक लिनेदिनेलाई तीन महिना सम्म कै’द प्रस्ताव गरिएको छ।
विहेमा गरगहना र दा’इजो लेनदेन नियन्त्रण गर्न सरकार पनि लागेको छ तर समाजमा यो क्रम अझै रोकिएको छैन। दुलाहाले दुलहीलाई पौने ४ तोला भन्दा बढी सुन वा त्यतिनै मुल्य पर्ने अन्य गरगहना भनदा बढि दिन नपाइने गरि हद तोकिएको भएपनि अहिले पनि बिहे गर्दा कम्तिमा पनि १० देखि १५ तोला सुन लागेकै हुन्छ । दुलही पक्षले दुलाहालाई पक्षलाई बढिमा २ तोला सम्म सुन दिन सक्छन्।
यो व्यवस्थालाई उल्लघंन गरेमा दिएको गहना जफत गरि त्यति नै ज’रिवाना र तीन महिना सम्म कै’द हुने छ। तिलक वा दाईजो नपाएर विहे नगर्ने र विहे गरिसकेपछि दुलहीलाई यातना दिने घटना घटिरहेका हुन्छन्। यस्ता कार्यलाई अ’पराध मानेर द’ण्डित गर्नु पर्ने प्रस्तावति कानुनमा उल्लेख छ। तिलक वा दा’इजोकै कारणले वेहुली लैजान इन्कार गर्नेलाई १ लाख सम्मको ज’रिवाना र तीन महिना सम्म कै’दको हुनेछ।
‘विहे खर्च वा पढाई, व्यापार, व्यवसाय र व्यक्तित्व विकासमा लागेको वा लाग्ने खर्च दुलाहा वा दुलही पक्षले अर्को पक्षसँग माग्न पाइने छैन’ जुन कुरा कानुनमा छ । त्यस्तै निम्तालुले दिन पाउने दाईजो वा उपहारको सीमा पनि तोकेको छ । टिकाटालो (जनै सुपा री) गर्दा हुने तडकभडक पनि रोकेको छ । दुलाहापक्षका २५ र दुलहीपक्षका ३५ जनाको सीमा तोकिएको छ ।
टिकाटालो गर्दा एक तोला सुनमात्रै लिन दिन पाइने हद तोकिएको छ। बिहेको जन्ती र भोजको निम्तालुको सीमा पनि बिधेयकले निर्धारण गरेको छ। बाजासहित १५० जना जन्ती र पार्टीमा ३५० जनाको । भोजमा १५० जना भन्दा बढी व्यक्ति बोलाउन नपाइने व्यव स्था गरेको छ। साथै बिहेमा आर्मी, सशस्त्र वा जनपद प्रहरीको व्याण्ड लान प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
विशेषगरि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुको छोराछोरीको बिहे, व्रतवन्ध वा अरु कार्यमा सरकारी व्यण्ड बजाउने चलन छ । विहे भोज, भतेर तथा अन्य समाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र गाविस वा नगरपालिकाको वडामा हिसाब बुझाउन पर्ने छ । सम्बन्धीत सिडीयोले खर्चको विवरण माग्न सक्ने छ। प्रस्तावित कानूनले यस्ता समारोहमा घर सजाउने र निमन्त्रणा खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाउन खोजेको छ ।
सामाजिक सुधार ऐन २०३३ मा पनि यस्तै कडा प्रावधान थिए । लगभग चार दशकसम्म त्यो ऐन कागजमा मात्र सीमित रह्यो। त्यसको पुनरावृत्ती नहोस् भन्नेमा पनि सरकार सचेत देखिएको छ। यस्तो भड्कीलो बिहेबारीको उजुर गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । उजुरकर्ताले विगोको २५ प्रतिशत पुरस्कार पाउने प्रावधान छ ।
यी मान्यता हुँदाहुँदै कानुन बिपरित समाजमा बिहे भैरहेका बेला यहाँका एक नवजोडीले विवाहको रकम जोगाइ विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना गरेका छन। जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका–४ सर्कुवाका तारा शर्मा र काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशका तीर्थप्रसाद गौतम ले काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशस्थित रेश नुन्थला माध्यमिक बिद्यालयमा रु एक लाख ११ हजार १११ को अक्षयकोष स्थापना गरेका हुन् ।
विवाहमा सुन किन्दा लाग्ने खर्च कटाइ पिता चन्द्रप्रसाद गौतमको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापना गरेको सोही विद्यालयमा पूर्वशिक्षकसमेत रहेका गौतमले जानकारी दिनुभयो । शर्मा युवासङ्घको नेतृ हुनुहुन्छ । “हामीले राम्रो कामको शुरु आत आफैँबाट गर्नुपर्छ”, शर्माले भन्नुभयो, “भड्किलो विवाहको अन्त्यका लागि समाजमा सकरात्मक सन्देश दिन खोजेका हौँ ।”
सो विद्यालयको ६४औँ वार्षिकोत्सब तथा अभिभावक दिवसको अवसरमा कोषबाट वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। कक्षा ११ , माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) का परीक्षामा सर्वाेत्कृष्ट जीपीए हासिल गर्ने तथा मावि तह, आधारभूत, प्राथमिक र पूर्वप्राथमिक तहका गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यसका साथै वर्ष शिक्षकसमेत छनोट गरेर पुरस्कृत गरिनेछ ।